Ozi nchedo data, ojiji kuki na nkwupụta - www.amp-cloud.de
Gbanwee ntọala nchekwa data:
Jiri bọtịnụ ndị a iji mepee ederede ederede na iji kuki, nke ị nwere ike iji gbanwee ntọala nchedo data ejikọtara.
Ibu banyere ọdịnaya nke www.amp-cloud.de:
Ejiri oke nlekọta kee ọdịnaya nke ibe www.amp-cloud.de. Enweghi nkwa ọ bụla maka izi ezi, izu oke na isiokwu nke ọdịnaya ahụ. Dịka onye na-ahụ maka ọrụ, ibu ọrụ dị ka § 7 Paragraf 1 TMG maka ọdịnaya nke dị na ibe www.amp-cloud.de na-emetụta dabere n'iwu izugbe. Dabere na §§ 8 ruo 10 TMG, agbanyeghị, ọ nweghị ọrụ dị ka onye na-ahụ maka ọrụ iji nyochaa ozi ndị ọzọ ebugara ma ọ bụ chekwaa ma ọ bụ nyocha ọnọdụ ndị na-egosi ọrụ megidere iwu. Ọrụ dịịrị iwepu ma ọ bụ gbochie iji ozi dabere na iwu izugbe anaghị emetụta. Agbanyeghị, ụgwọ maka ntụnye aka a ga -ekwe omume na mbido site na mgbe anyị matara maka mmebi iwu. Ozugbo anyị matara maka imebi iwu dabara, a ga -ewepụ ọdịnaya a ozugbo enwere ike.
Ibu banyere njikọ na www.amp-cloud.de:
Ihe onyinye sitere na www.amp-cloud.de nwere ike ịnwe njikọ na weebụsaịtị ndị ọzọ na-abụghị nke onye ọrụ ya nke www.amp-cloud.de enweghị mmetụta. Ya mere, ọ nweghị nkwa e nyere maka ọdịnaya mpụga a. Onye na-eweta ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ nke ibe ndị ahụ na-ahụkarị maka ọdịnaya nke ibe ndị ejikọtara. Ọ bụrụ na anyị amata mmebi iwu, a ga-ewepụ njikọ ndị ahụ ozugbo enwere ike.
Ọdịnaya na ọrụ nke onye ọrụ webụsaịtị wepụtara na ibe www.amp-cloud.de dị n'okpuru iwu nwebisiinka nke German. Mmeputakwa, nhazi, nkesa na ụdị nrigbu ndị ọzọ na-abụghị iwu iwu nwebisiinka chọrọ nkwenye ederede nke onye edemede, onye okike ma ọ bụ onye ọrụ. A na-ekwe ka nbudata ọ bụla na mbipụta nke saịtị a maka ojiji nkeonwe. A machibidoro ụdị azụmaahịa ọ bụla na-enweghị nkwenye nnabata nke onye edemede ziri ezi! Dịka ọdịnaya nke peeji nke www.amp-cloud.de abụghị onye ọrụ webụsaịtị mepụtara n'onwe ya, a na-ahụ ikike nwebisiinka nke ndị ọzọ. Maka nke a, edere ọdịnaya nke atọ dị ka nke a. Ọ bụrụ na iwu nwebisiinka ahụ apụta ìhè na agbanyeghị, anyị ga-agwa gị ka ị gwa anyị ya. Ọ bụrụ na anyị mata mmebi iwu, a ga-ewepụ ọdịnaya dị otu a ngwa ngwa.
Nchedo data na nlele:
Ozi ndị a na-enye nkọwa dị mfe nke ihe na-eme data nkeonwe gị mgbe ị gara na webụsaịtị anyị. Data nkeonwe bụ data niile enwere ike iji mata gị. Enwere ike ịchọta ozi zuru ezu na isiokwu nke nchekwa data na nkwupụta nchedo data anyị depụtara n'okpuru ederede a.
A na-eme nhazi data na webụsaịtị a site n'aka onye na-ahụ maka weebụsaịtị. Ị nwere ike ịhụ nkọwa kọntaktị ha na akara nke webụsaịtị a.
A na-edekọ data ndị ọzọ na akpaghị aka site na sistemụ IT anyị mgbe ị gara na weebụsaịtị. Nke a bụ tumadi teknuzu data (dịka ihe nchọgharị internetntanetị, sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ oge nke ihu peeji). A na-anakọta data a na akpaghị aka ozugbo ị banyere na weebụsaịtị anyị.
Kedu ihe anyị ji data gị?
Ngwa nyocha na ngwaọrụ ndị ọzọ
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị, enwere ike nyochaa omume ịkwọ ụgbọ mmiri gị na ọnụ ọgụgụ. A na-eme nke a na kuki na ihe a na-akpọ mmemme nyocha. A na-enyochakarị omume ịkwọ ụgbọ mmiri gị n'amaghị aha; Enweghị ike ịchọta omume ịkwọ ụgbọ mmiri n'aka gị. Ị nwere ike ịjụ nyocha a ma ọ bụ gbochie ya site na iji ụfọdụ ngwaọrụ. Ị nwere ike ịchọta ozi zuru ezu na nke a na nkwupụta nchedo data ndị a.
Ndị na -arụ ọrụ webụsaịtị a na -echedo data nkeonwe gị nke ọma. Anyị na -ejikwa data nkeonwe gị na nzuzo yana dịka iwu nchekwa data siri dị yana nkwupụta nchedo data a.
Mgbe ị na -eji webụsaịtị a, a na -anakọta data nkeonwe dị iche iche. Data nkeonwe bụ data nke enwere ike iji aka gị mata onwe gị. Nkwupụta nchedo data a na -akọwa data anyị nakọtara yana ihe anyị na -eji ya. Ọ na -akọwakwa otu esi eme nke a na ebumnuche ya.
Ọ ga-amasị anyị ịkọwa na nnyefe data na ịntanetị (dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-ekwurịta okwu site na ozi-e) nwere ike nwee oghere nchekwa. Nchedo zuru oke nke data megide nnweta nke ndị ọzọ agaghị ekwe omume.
Ahụ maka ọrụ nhazi data na webụsaịtị a bụ:
Ahụ ọrụ dịịrị bụ onye okike ma ọ bụ onye iwu nke, naanị ya ma ọ bụ yana ndị ọzọ, na-ekpebi ebumnuche na usoro nhazi data nkeonwe (dịka aha, adreesị email, wdg).
Ọtụtụ arụmọrụ nhazi data ga-ekwe omume naanị nkwenye nkwenye gị. Can nwere ike ịkagbu nkwenye gị n'oge ọ bụla. Ozi email anyị na-ezighi ezi ezuola. Iwu nke nhazi data emere tupu wepu ya adighi emetụta ya.
Ikike nke ịrịọ arịrịọ maka ikike nlekọta nke ruru eru
Ọ bụrụ na emebie iwu nchekwa data, onye ahụ metụtara nwere ikike iwe mkpesa n'aka ndị isi nlekọta nlekọta. Ikike nlekọta na-ahụ maka nchekwa data bụ onye na-ahụ maka nchekwa data nke steeti etiti ụlọ ọrụ anyị. Ndepụta nke ndị ọrụ nchekwa data na nkọwa kọntaktị ha nwere ike ịchọta na njikọ ndị a: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Ikike ibu data
Ị nwere ikike ịnweta data nke anyị na-ahazi na-akpaghị aka na ndabere nke nkwenye gị ma ọ bụ na mmezu nke nkwekọrịta enyefeworo gị ma ọ bụ n'aka ndị ọzọ n'ụdị nkịtị, igwe na-agụ. Ọ bụrụ na ị rịọ ka ịnyefe data ozugbo nye onye ọzọ nwere ọrụ, nke a ga-eme naanị ruo n'ókè ọ ga-ekwe omume na teknụzụ.
N'ime usoro nke usoro iwu dị adị, ị nwere ikike inwere onwe ozi gbasara data onwe gị echekwara, mmalite ha na onye nnata ya na ebumnuche nhazi data yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ikike idozi, gbochie ma ọ bụ hichapụ data a. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla na adreesị enyere na ọkwa iwu ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu nkeonwe.
Imegide ozi mgbasa ozi
Anyị na-ajụ ugbu a iji ojiji nke kọntaktị data bipụtara na ọnọdụ nke ọrụ akara maka izipu mgbasa ozi na ihe ọmụma na-akwadoghị. Ndị na-arụ ọrụ nke ibe ahụ nwere oke ikikere ịme ihe iwu ma ọ bụrụ na ezigara ozi mgbasa ozi na-akwadoghị, dị ka ozi ịntanetị spam.
Ọtụtụ kuki anyị na-eji bụ ihe a na-akpọ "kuki nnọkọ". A na -ehichapụ ha na akpaghị aka mgbe nleta gị gasịrị. A na -echekwa kuki ndị ọzọ na ngwaọrụ gị ruo mgbe ihichapụ ha. Kuki ndị a na -enyere anyị aka ịmata ihe nchọgharị gị oge ọzọ ị gara.
A na-echekwa kuki ndị achọrọ iji rụọ ọrụ nkwukọrịta kọmputa ma ọ bụ nye ụfọdụ ọrụ ịchọrọ (dịka ọrụ ụgbọ ibu azụmahịa) dabere na Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Onye na-ahụ maka ebe nrụọrụ weebụ nwere ezigbo mmasị na nchekwa nke kuki maka teknụzụ na-enweghị ntụpọ na nke kachasị nke ọrụ ya. Ọ bụrụ na echekwara kuki ndị ọzọ (dịka kuki maka nyochaa akụrụngwa gị sọfụ), a ga-agwọ ha iche iche na nkwupụta nchedo data a.
Ụdị kuki "Ọrụ"
Cookies in the “Function” category are soly function and mkpa maka ọrụ nke weebụsaịtị ma ọ bụ iji mejuputa ụfọdụ ọrụ. Nke a pụtara na ndị na-enye ọrụ n’otu ụdị a enweghị ike ịkwụsị ọrụ.
Kuki na otu "Ojiji" sitere na ndị na-enye ọrụ na-enye ụfọdụ arụmọrụ ma ọ bụ ọdịnaya, dị ka ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta, ọdịnaya vidiyo, mkpụrụ edemede, wdg. Ndị na-enye ụdị a na-emetụta ma ihe niile dị na ibe ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Otu kuki "ihe nha"
Kuki na otu "Mmesho" sitere na ndị na-enye ọrụ nwere ike nyochaa ohere ịnweta weebụsaịtị (n'amaghị ama, n'ezie). Nke a na-enye nnyocha banyere arụmọrụ weebụsaịtị na otu esi eto. Site na nke a, enwere ike nweta ihe, dịka ọmụmaatụ, iji melite saịtị ahụ ogologo oge.
Kuki sitere na otu "Ego" si n'aka ndị na-eweta ọrụ ndị ọrụ ha na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ yana akụkụ nke weebụsaịtị na-enye. Nke a na-akwado nlanarị nke weebụsaịtị.
Faịlụ ndekọ sava
Onye na-eweta ibe ahụ na-anakọta ma na-echekwa ozi na-akpaghị aka na faịlụ ndekọ ihe nkesa, nke ihe nchọgharị gị na-enyefe anyị na-akpaghị aka. Ndị a bụ:
Ihe mgbakwunye Facebook (dị ka & bọtịnụ kekọrịta)
Ọ bụrụ n'ịchọghị ka Facebook nwee ike ekenye gị nleta anyị na websaịtị gị na akaụntụ Facebook gị, biko pụọ na akaụntụ ọrụ Facebook gị.
Ngwa mgbakwunye Google+
Nchịkọta na mgbasa ozi: You nwere ike iji bọtịnụ Google bipụtara ozi n'ụwa niile. Gị na ndị ọrụ ndị ọzọ na-enweta ọdịnaya nke onwe na Google na ndị mmekọ anyị site na bọtịnụ Google+. Google na-echekwa ozi ị nyere + 1 maka otu ọdịnaya na ozi gbasara ibe ahụ ịlere mgbe ịpịrị +1. Enwere ike igosi + 1 gị dị ka ihe ngosi yana aha profaịlụ gị na foto gị na ọrụ Google, dị ka nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụ na profaịlụ Google gị, ma ọ bụ na ebe ndị ọzọ na weebụsaịtị na mgbasa ozi na ịntanetị.
Google na - edekọ ozi gbasara ihe omume gị + 1 iji melite ọrụ Google maka gị na ndị ọzọ. Iji nwee ike iji bọtịnụ Google+, ị ga-achọ ọhụụ zuru ụwa ọnụ, profaịlụ Google ọha na eze nke ga-enwerịrị opekata mpe aha ahọrọ maka profaịlụ. A na-eji aha a eme ihe na ọrụ Google niile. Mgbe ụfọdụ, aha a nwekwara ike dochie aha ọzọ ị jiri mgbe ị na-ekekọrịta ọdịnaya site na akaụntụ Google gị. Enwere ike igosi ndị ọrụ maara adreesị ozi-e gị ma ọ bụ ndị nwere ozi njirimara ndị ọzọ gbasara gị njirimara nke profaịlụ Google gị.
Ojiji nke ozi anakọtara: Na mgbakwunye na ebumnuche edepụtara n'elu, a ga -eji ozi ị nyere dị ka iwu nchekwa data Google si dị. Google nwere ike bipụta nchịkọta dị mkpirikpi gbasara ọrụ +1 nke ndị ọrụ ma ọ bụ nyefee ya n'aka ndị ọrụ na ndị mmekọ, dị ka ndị mbipụta akwụkwọ, ndị mgbasa ozi ma ọ bụ weebụsaịtị nwere njikọ.
Ebe nrụọrụ weebụ a na -eji ọrụ nke ọrụ nyocha weebụ Google Analytics. Onye na -eweta ya bụ Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Nchịkọta Google na-eji ihe akpọrọ "kuki". Ndị a bụ faịlụ ederede echekwara na kọmputa gị nke na -enyere gị aka inyocha weebụsaịtị. Ozi kuki mepụtara maka iji webụsaịtị a na -ebufekarị na sava Google na USA ma echekwa ya.
Nchekwa kuki nchịkọta Google dabere na nka. 6 Para. 1 lit.f GDPR. Onye na -ahụ maka webụsaịtị nwere mmasị ziri ezi n'ịtụle omume onye ọrụ iji bulie ma webụsaịtị ya na mgbasa ozi ya.
Anyị emeela ka ọrụ amaghị aha IP dị na webụsaịtị a. N'ihi nke a, Google ga -ebelata adreesị IP gị n'ime mba ndị so na European Union ma ọ bụ na steeti nkwekọrịta ndị ọzọ nke Nkwekọrịta na Mpaghara Akụ na ụba Europe tupu ebufe ya na USA. A ga -eziga adreesị IP zuru ezu na sava Google na USA wee belata ebe ahụ n'ọnọdụ ndị pụrụ iche. Na nnọchite nke onye na -ahụ maka webụsaịtị a, Google ga -eji ozi a wee tụọ ojiji nke webụsaịtị a, iji chịkọta akụkọ na ọrụ webụsaịtị yana inye onye na -ahụ maka webụsaịtị ọrụ ndị ọzọ metụtara ọrụ webụsaịtị na ojiji ịntanetị. Adreesị IP nke ihe nchọgharị gị na -ebunye dị ka akụkụ nke nchịkọta Google agaghị ejikọta na data Google ndị ọzọ.
Ị nwere ike igbochi nchekwa kuki site na ịtọọ ngwanrọ ihe nchọgharị gị n'otu aka ahụ; anyị ga-achọ ịkọwapụta, Otú ọ dị, na nke a, ị gaghị enwe ike iji ọrụ niile nke weebụsaịtị a ruo n'ókè ha. Ị nwekwara ike igbochi Google ịnakọta data nke kuki na-emepụta yana metụtara ojiji nke weebụsaịtị (gụnyere adreesị IP gị) yana ịhazi data a site na nbudata nkwụnye ihe nchọgharị dị n'okpuru njikọ na-esonụ wee wụnye: https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ihe mgbochi megide nchịkọta data
Ị nwere ike ịchọta ozi gbasara otu Google Analytics si ejikwa data onye ọrụ n'ime iwu nzuzo Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Anyị ejiri nkwekọrịta Google mechie nkwekọrịta nhazi data nkwekọrịta na mejuputa iwu siri ike nke ndị nwe obodo nchebe data German mgbe ị na-eji Google Analytics.
Ozi kuki na mgbama webụ ewepụtara gbasara ojiji webụsaịtị a (gụnyere adreesị IP gị) yana nnyefe nke usoro mgbasa ozi bụ Google na-ebunye ma chekwaa ya na sava dị na United States. Google nwere ike ịnyefe ozi a n'aka ndị mmekọ Google. Agbanyeghị, Google agaghị ejikọta adreesị IP gị na data ndị ọzọ echekwara gbasara gị.
Nchekwa kuki AdSense dabere na Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Onye na-ahụ maka webụsaịtị ahụ nwere mmasị ziri ezi n'ịtụle omume onye ọrụ iji bulie ma webụsaịtị ya na mgbasa ozi ya.
Maka ebumnuche a, ihe nchọgharị ị na-eji ga-ejikọta na sava Google. Nke a na - eme ka Google mara na abanyela weebụsaịtị anyị site na adreesị IP gị. Ojiji nke Google Web Fonts bụ maka mmasị nke edo edo na ngosi ngosi nke onyinye anyị n'ịntanetị. Nke a na-anọchite anya ezi mmasị dị n'ime ihe Art. 6 Para. 1 lit.f GDPR.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ na Google Web Fonts na https://developers.google.com/fonts/faq na iwu nzuzo Google: